Counselling Corner Myanmar - အလုပ်သမားများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီမှု အစီအစဉ်
အလုပ်သမားများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီမှု အစီအစဉ်
Posted on ဩဂုတ် 26, 2020 စက်တင်ဘာ 7, 2020 | မှတ်ချက်များ မရှိပါ။
Employee Assistance Programe (EAP) ဆိုတာ ဘာလဲ။
(EAP) ဆိုတာက အလုပ်သမားများ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာများ နှင့် မိသားစုပြဿနာများ ဖြစ်ကြတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှု၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ မိဘအုပ်ထိန်းမှု၊ စိတ်ခံစားချက် ပြဿနာ၊ ငွေရေးကြေးရေ ပြဿနာ များကို အလုပ်ရှင် ဘက်က ကူညီပြီး ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(EAP) သည် အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာများကြောင့် လုပ်ငန်းခွင် စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ (EAP) သည် confidential ဖြစ်သော ကြောင့် သတင်းအချက်အလက်ပေါက်ကြားခြင်းကို စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပေ။
1. စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ပြုမူနေထိုင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (Wellbeing)
စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ဖို့ ဆိုတာဟာ လူသားတွေ နိစ္စဓူဝ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော ပင်မ အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် လူနေမှု ဘဝပုံစံသည် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ခြေ အလားလာ ပိုများသော ကြောင့် မိမိနှင့် မိမိ မိသားစု ကို ကောင်းမွန်စွာ ကူညီဖေးမ နိုင်ဖို့ အတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်အောင် ပြုမူသင့်သော နည်းလမ်းများကို သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။
2. ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် လိင်အသိပညာပေး သင်တန်းများ (Gender and Sexuality)
ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုသည် ရေပန်းစားလာသော စကားရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လက်ရှိအခြေနေထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီအရာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးချ နေပြီလား။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ မိသားစုမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းများကြားမှာ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု အမှန်တကယ်ရ ရှိနေကြပြီလား။ မိမိ အခွင့်ရေးကို အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့ တစ်ပါးသူရဲ့အခွင့်အရေးကို မထိပါး ဖို့အတွက် တန်းတူညီမျှခြင်း ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို ပိုမိုလေးနက်စွာသိရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
3. မိမိကိုယ်ကို သိရှိနားလည်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ (Self-Awareness)
မိမိအကြောင်းကို မိမိသိခြင်းဆိုတာဟာ မိမိနဲ့ တစ်ခြားသူတွေကြားက ဆက်ဆံရေး ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင် မှာ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ မိမိရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သိရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မှန်ကန်စွာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတတ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
4. စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် စိုးရိမ်သောက များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ (Coping with Anxiety and Stress)
စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ လူအများစု က အပြင်မှာ ပေါက်ကွဲခြင်း ဒါမှမဟုတ် မျိုသိပ်ထားခြင်း စတဲ့ အလေ့အကျင့်များ ကိုပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအပြုမူများက မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုမို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ရင်ဆိုင် ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ မိမိနဲ့ မိမိ မိသားစု အပါအဝင် မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကိုပါ ထိခိုက် စေနိုင်တာကြောင့် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ မကိုင်တွယ်နိုင်ပါက တစ်နေ့တစ်ခြား ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
5. ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနည်းလမ်းများ (Communication)
Communication ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတွင် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးသော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Language, tone, culture တို့သည် ထိရောက်သော ပြောဆို ဆက်ဆံရေး တစ်ခုဖြစ်ဖို့ မရှိမဖြစ်သိသင့်သောအရာများဖြစ်သည်။ ထိုအရာများကို သင့်တော်သလို အသုံးမပြုနိုင်လျှင် communication barriers များဖြစ်စေသောကြာင့် ပြောဆို ဆက်ဆံရေးသည် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကြား အလုပ် လုပ်ရာမှာ ခရီးပိုတွင်ခြင်း၊ ရင်နှီးမှုပို ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ထိရောက်သော ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
6. စိတ်ကျင့်စဉ်နည်းလမ်းများ (Mindfulness)
စိတ်ကျင့်စဉ် သည် မိမိစိတ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာကြားက ဆက်နွယ်မှုကို သတိ၊အသိ နှင့် ကြည့်နိုင်ရန်၊ စိတ်ကို လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်မှာ ထားတတ်အောင် လေ့ကျင့်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျင့်စဉ်သည် stress and worry တွေကို သက်သာစေပြီး သမာဓိ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ Mindfulness သည် attention ရှိဖို့ကို လည်း တွန်းအားပေးပါတယ်။
Posted in လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ၀န်ထမ်းများဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ, ဝန်ဆောင်မှုများ.
← သတင်း (၁)
လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ Workshop →